Isibambo somnyango, isibambo somnyango wengilazi, isibambo somnyango wangaphakathi - YALIS
Ubani I-YALIS Design
I-YALIS Design ihola umkhiqizi okhethekile ku-hardware yeminyango yeminyango.I-YALIS Design, iwumkhiqizo ikakhulukazi wezibambo zomnyango we-zinc alloy lever kanye nesixazululo sehardware yeminyango enolwazi olungaphezu kweminyaka eyi-10.
Iyini Imikhiqizo Yethu Eyinhloko
I-YALIS Design izibambo zeminyango yemikhiqizo eyinhloko imaphakathi futhi isezingeni eliphezulu emakethe enomklamo oyingqayizivele kanye nekhwalithi ezinzile, futhi ihlinzeka amakhasimende ngezixazululo zehadiwe yomnyango ochwepheshe.
I-YALIS Intelligent Manufacturing
I-YALIS Design inemboni yayo.Ukuze kuthuthukiswe kangcono ukukhiqiza ngendlela efanele, i-YALIS yethula okokusebenza okuzenzakalelayo kanye nohlelo lokuphatha lwe-ISO ngo-2020.
Isixazululo sohlelo lokusebenza lomkhiqizo
Isixazululo se-Hardware ye-Slim Frame Glass Door
Ngokuduma kwesitayela se-minimalist, iminyango yengilazi yefreyimu emincane kancane kancane ithandwa ngamakhasimende.Nokho, iningi ingilazi iminyango izingidi emakethe azifanele slim Uhlaka glass iminyango.Ukuze kuxazululwe le nkinga, i-YALIS yethule izingidi zezicabha zengilazi yohlaka oluncane kanye nesixazululo sehardware yomnyango wengilazi yohlaka oluncane.
Isixazululo se-Minimalist Door Hardware
Njengomphakeli wesixazululo sezingxenyekazi zekhompiyutha ezisezingeni eliphezulu, i-YALIS ithuthukise izingidi zezibambo zeminyango yeminyango emincane (iminyango engabonakali kanye neminyango yokuphakama kosilingi).Ngokhiye wesibambo somnyango omncane njengomongo, i-YALIS ihlanganisa isisombululo sehadiwe yomnyango omncane.
I-Interior Wooden Door Hardware Solution
I-YALIS ithuthukise izingidi zeminyango yesimanje yangaphakathi kanye nezingidi zezibambo zeminyango kanokusho ezithengekayo ngokuya ngobuhle babantu abasha kanye nezidingo zabakhiqizi beminyango, inikeza isixazululo sehardware yomnyango wokhuni wangaphakathi ohlukile kumakhasimende.
Isixazululo se-Ecological Door Hardware
Iminyango yezemvelo, eyaziwa nangokuthi iminyango yokhuni ye-aluminium, ngokuvamile inobude obuphakathi kuka-2.1m no-2.4m, futhi iminyango yayo ingahlanganiswa ngokukhululekile futhi ishintshwe nohlaka lomnyango.I-YALIS ithuthukise isixazululo se-ecological door hardware esekelwe kulezi zici.
Isixazululo se-Hardware ye-Child Room Door
I-YALIS inaka ukuphepha kwezingane ekamelweni, njengokukhiya ngephutha, ukuwa kwangaphakathi, izingozi ezingazelelwe nokunye.Ngakho-ke, i-YALIS ithuthukise ukukhiya isibambo somnyango wezingane zomnyango wegumbi lezingane, okungavumela abazali ukuba bavule umnyango ngokushesha lapho ingane isengozini.
Sicela usishiye futhi sizokuthinta kungakapheli amahora angama-24.
Uneminyaka engaphezu kwengu-20 egxile embonini ye-hardware yomnyango futhi unekhono ezinhlelweni ezihlukahlukene ze-hardware zeminyango.Iminyaka engaphezu kwengu-20, uye waqoqa ulwazi olucebile ekuthuthukisweni kwesakhiwo kanye nolwazi olujulile lwehadiwe yomnyango, futhi athuthukise imikhiqizo ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
Njengonjiniyela wenqubo ye-YALIS, ulawula ngokuqinile yonke inqubo emsebenzini wakhe wansuku zonke ukuze aqinisekise izinga lemikhiqizo yezandla kanye nekhwalithi yemikhiqizo.Ngaphezu kokuqinisekisa izinga lemisebenzi yezandla kanye nekhwalithi yemikhiqizo, futhi ngokuqhubekayo uthuthukisa imisebenzi yezandla emisha ngokuya ngezidingo zemakethe namakhasimende.
Uthola ugqozi empilweni yansuku zonke, ahlanganise amathrendi emfashini yesimanje, futhi usebenzisa ukugqama kwezinto kanye nokuqedwa kwengaphezulu ukuze enze imikhiqizo ishube kakhulu kodwa futhi ibe nenhle kakhulu, futhi isondele nakakhulu ku-minimalism.
Ubeka isasasa lakhe ekwakhiweni komkhiqizo ngamunye, uphishekela ubuciko baphakade nobuncane, futhi ukhulumela impilo yokudala nelula.Umuzwa oyingqayizivele womugqa uwuphawu lwakhe, futhi uzimisele ukuguqula imiqondo yomklamo wangempela ibe imikhiqizo yehadiwe yobuciko eyingqayizivele.
abakhiqizi bezikhiya zangaphakathi bakuthatha...
Iluphi uhlobo lwempahla olulungele i-hos...
Uhlamvu lwempahla yesibambo somnyango we-Zinc alloy...
Njengoba intengo yethusi yensimbi iqhubeka nokukhuphuka, ubuchwepheshe be-zinc alloy electroplating buye bakhuphuka.Njengamanje, izibambo eziningi zeminyango ziye zayeka ukusebenzisa ithusi ukuzenza futhi esikhundleni sazo zifake ama-zinc alloys.Okulandelayo, i-YALIS Hardware yabhala isifinyezo solwazi oluyinhloko lomnyango we-zinc alloy ...